Tusaalooyinka astaanta dugsiga | Hal-abuurka khadka tooska ah
Iris Gamen | 06/05/2022 19:00 | dhowr
Naqshadaynta astaanta dugsiga ma aha hawl fudud ama degdeg ah sida wax kasta oo la xiriira naqshadeynta. Waxay u baahan tahay waqti iyo shaqo joogto ah abuurkeeda. Waa lagama maarmaan in la sameeyo baaritaan horudhac ah si loo ogaado taariikhdeeda oo loo baaro calaamadaha kale ee dugsiga si loo raadiyo tixraacyo.
Habka abuurista aqoonsi shirkadeed waxay tusinaysaa shaqo u baahan iyo dedaalka dhinaca kooxda naqshadaynta. Waa inaad noqotaa xirfadlayaal si aad u gaarto natiijooyin wanaagsan oo ku saabsan horumarinta astaanta machad waxbarasho.
Goobta waxbarashada waxaa loo arkaa mid ka mid ah kuwa ugu sharafta iyo xirfadda badan ee jira, sidaas darteed waa inaad noqotaa mid dalbanaysa oo awood u leh inaad abuurto aqoonsi si waafaqsan falsafadaada iyo habka aad u shaqeyso. Waa inay ahaadaan calaamado nadiif ah, oo leh dhammayn wanaagsan iyo shakhsiyad.
1 Maxay tahay inay calaamad u yeelato xarunta waxbarashada?
2 Calaamadaha dugsiga si ay kuu dhiirigeliyaan
2.2 Dugsiga Maria Nebrera
2.4 Dugsiga Juan Rulfo
Maxay tahay inay calaamad u yeelato xarunta waxbarashada?
Astaantu waa sida dugsigu uga duwan yahay inta kale dadweynahana tusi sida ay yihiin xarun waxbarasho.
Marka naloo soo bandhigo fursadda lagu naqshadeynayo aqoonsiga dugsiga, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan ka fikirno, ka dib habka cilmi-baarista iyo tixraaca, waa maxay. Maxay xaruntu rabtaa in ay gudbiso?. Iskuulka caadiga ah ma gudbin doono wax la mid ah midka waxbarashada diinta.
Hal-abuurnimadu meel fog bay maraysaa, waana inaad diiradda saara ururinta macluumaadka macaamiisha intii suurtagal ah, ma aha oo kaliya waxa nidaamkooda waxbarasho ku salaysan yahay, balse waxa ay raadinayaan, ujeeddooyinkooda, sida ay rabaan in loo arko, iwm.
Kooxda naqshadeynta waa in ay qooyaan dhammaan macluumaadkan oo ay la shaqeeyaan foomka lagu sameeyay cilmi-baarista si ay u helaan fikradaha ugu muhiimsan ee xarunta si ay uga shaqeyso. Macluumaadka badan ee la helo, habka naqshadeynta ayaa fududaan doona.
Sida shirkadaha kale, xarumaha waxbarashadu "ku tartamayaan" dhexdooda si loogu doorto doorasho waxbarasho oo carruurteena ah. Waxay iibiyaan aqoonta mana aha sababtaas, uma baahna aqoonsi wax ku ool ah oo la jaan qaadaya waxay bixiyaan. Summada hufan, xooggan, ammaanku waa waxa kaa caawin kara inaad ka soocdo tartamayaashaada., marka laga reebo deeq waxbarasho, qalab, xirfadlayaal, iwm.
Logo wax ku ool ah waa wejiga dugsiga, kaliya ma sheegayso aragtida waxbarasho ee xarunta, laakiin sidoo kale waxay muujineysaa meelaha ay ku takhasusaan. Waa inaad u sheegtaa nooca waxbarashadaada sidaan horay u soo sheegnay, laakiin isla markaa waa inay fududaato in la xasuusto.
Calaamadaha dugsiga si ay kuu dhiirigeliyaan
Qaybtan, waxaan u soconaa ururiyaan calaamadaha kala duwan ee xarumaha waxbarashada iyo dugsiyada. Waxaan ka hadli doonaa habka naqshadeynta iyo walxaha ka kooban.
Waxaynu muujin doonaa aqoonsiga jaamacadaha ugu caansan ilaa kuwa caadiga ah. Waxaad ka heli doontaa liis leh qaar ka mid ah calaamadaha sida ugu fiican u shaqeeya ilaa hadda.
Machad tacliin sare oo ka tirsan Jesuits. Astaantu waa oo lagu dhisay saldhig wareeg ah oo leh xarun fiiqan iyo wareegyo kooban. Qaybta dhexe ee aqoonsiga waxa ku jira gaashaanka, oo u qaybsan laba qaybood.
Qeybta sare ee gaashaanka, waxaan ku arki karnaa leydi madow oo ay ku yaalliin astaanta qorraxda iyo qoraalka IHS, iyo sidoo kale iskutallaab iyo laba taaj. Xagga hoose ee casaanka, waan arki karnaa saddex buurood iyo korkooda buug furan oo hal-ku-dheggiisu yahay.
Ku duubida gaashaanka xagga hoose waa xaraf leh weedha, Religioni et Bonis Artibus. Ugu dambeyntii, ku wareegsan dhammaan halabuurkan, goobaabin ayaa la dhigayaa magaca xarunta oo ah Laatiinka iyo sanadka aasaaska.
Dugsiga Maria Nebrera
Astaanta dugsigani waa oo loo dhisay qaab gaashaan ama calaamad. Gudaha dhexdeeda, magaca xarunta waxbarashada ayaa ku yaal, iyo sidoo kale astaamo kala duwan oo matalaya magaalada uu ku yaal Iskuulka María Nebrera.
ka saddex calaamadood oo ku dhex yaal astaanta ayaa leh hawl kale, waana in la qoondeeyo qayb ka mid ah xarunta. Qaybta bidix ee sare waxaa ku yaal sawirka ugu yar ee Sierra Nevada, kaas oo la xidhiidha aagga carruurta. Waxaa ku xiga sumadda Alhambra, oo loo qoondeeyay aagga aasaasiga ah. Iyo, ugu dambeyntii, curiyaha la xidhiidha meelaha la wadaago, Granada.
Xaaladdan oo kale astaanta dugsigan waxa loo qaybiyaa qaybo si fiican loo aqoonsan karo sida astaanta iyo astaanta. Astaanta waxaa loo qaabeeyey iyadoo lagu saleynayo jaantus joomatari sida goobada oo laga helo astaanta xaruntan. Dhanka kale, sumadda waxaan ku arki karnaa ma aha oo kaliya magaca dugsiga laakiin sidoo kale goobta.
naqshadeeye, calaamad laba midab oo shirkadeed, mid ka mid ah ugu weyn oo ah midka aan ku aragno astaanta iyo mid kale oo sare, taas oo loo isticmaali doono codsiyada kala duwan ee loo abuuray sidii midab taageero ah ama xaaladaha loo baahan yahay in calaamadda la dhigo dusha sare ee sawirka.
Dugsiga Juan Rulfo
Iskuulkan waxa uu ku yaalaa magaalada Usme ee dalka Colombia waxay leedahay naqshad ku salaysan bilicda gaashaanka. Cunsurkani waxa uu ka samaysan yahay qaab dheeman ah oo ay ku doonayaan in ay ku diraan farriin isbeddel ah, taas oo ah, ardaydoodu waa la dhalaaliyaa ilaa ay ka soo dhalaalaan marka ay u baxaan dunida dhabta ah.
In gunta gaashaanka Waxaan arki karnaa koox isku duuban qaabkan oo aad ku akhrin karto halhays magaalada hoose, "Guushu waa aniga". Dhammaan aqoonsiga astaanta ayaa lagu dhisay khadadka kor u kaca ee raba inay muujiyaan raadinta koritaanka.
Xaaladdan oo kale, calaamaddan sida tii hore ayaa leh laba siyaabood oo loo isticmaalo. Mid ka mid ah waxaan u isticmaali karnaa si buuxda aqoonsiga, laakiin codsiyo kala duwan kaliya waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la isticmaalo gaabin CJR.
Tusaalooyinkan waxaad ka heli kartaa fikradda cilmi-baarista iyo shaqada naqshadeynta ee ku lug leh calaamadda dugsiga. Kaliya waa inaad diirada saartaa baahiyaha xarunta waxbarashada oo aad isku daydo inaad meelaha ama astaamaha lagu garto u qaado heer kale.
Waxaan rajeyneynaa inaan kaa caawinno tusaalooyinkan kala duwan si marka laguu soo bandhigo naqshadeynta xarun waxbarasho, waxaad ogaan doontaa sida loo wajaho mawduuca.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Tusaalooyinka calaamadaha dugsiga